SomaliaReport: Dawladda oo isu Diyaarinaysa Weeraro Kale
Dawladda ku meel gaadh ah ayaa wadda olole hor leh oo ay ku doonayso inay kula wareegto magaalooyinka kale eek u dhaw xuduudda Kenya halka ay Al-Shabaab ka soo daabulaynayso magaalada Kismaayo boqolaal kale si ay uga hortagto weerarada ku soo fool leh. Wargayska Somalia Report ayaa warbixintaa ka helay ilo khaas ah.
Ciidamada dawladda ku meel gaadhka ah ee dhawaan lagu soo tababaray dalka Kenya iyo malayshiyooyinka deegaanka ayaa dagaaladii dhawaa horumaro ka sameeyey, kulana wareegay dhawaan magaalada Dhoobley ee ka tirsan gobolka jubada hoose. Dadka geegaanka ayaa sheegaya inay ciidamada dawladda ku meel gaadhka ah iyo malayshiyada Raaskaambooniinta oo ay taakulaynayaan dayaaradaha qumaatiga u kaca ee Kenya iyo Tangiyadeeda ay galeen dagaal aad u khadhaadh kaasoo keenay dhimashada in ka badan 20 dagaalyahanada Al-Shabaab, tiro kale oo badan oo uu ku jiro sarkaal sare oo Al-Shabaab ka tirsanna ay ku dhaawacmeen.
Guddi wasiiro ah oo uu ka mid yahay ku xigeenka wasiirka difaaca, mudane C/rashiid Maxamed Xiddig ayaa dhawaan booqashadii u horaysay ku aaday gobolada ay ka midka yihiin Gedo iyo Jubada hoose si ay kor ugu qaadaan hamiga ciidanka dawladda. Mid ka mid ah wasiirada oo ka gaabsaday in la magacaabo ayaa wargayska Somalia Report u sheegay in ahmiyadda tallaabadani tahay xoojinta aagagga ay dawladdu gacanta ku hayso hadda.
“Dawladdu waxay la wareegi doontaa Afmadaow,Qooqaani iyo Tabto oo ka tirsan jubada dhexe iyo Bardheere,Gabaharey iyo Buurdhuube o oak tirsan gobolka Gedo” ayuu ku yidhi Wargayska Somalia Report. Isaga oo hadalkiisa sii watan wuxuu sheegay inay tallaabadani tahay qorshahooda midkan ku xiga, waayo ayuu yidhi waxaa nagu adkaan doonta inaan xajisano meelaha aan qabsanay haddaynan dawladdu isku fidin aagaggaas oo idil.
“Weeraradeenu waxay leeyihiin saldhigyo iyo bartilmaameedyo aanan hadda ka hor dhici Karin, balse waxaa naga go’an inaan xorayno waddanka oo dhan”. Ayuu intaa sii raaciyey.
Suxufi ku sugan magaalada Kismaayo, xaalado amni dartoodna ka gaabsaday in magaciisa uu sheego ayaa ku soo waramaya inay Al-Shabaab ay boqolaal dagaalyahaniinteeda ah ka dirayso Kismaayo, kuna wajahan Afmadow si ay uga hortagaan weeraradan ku soo fool leh. Afmadow waxay 110 Km u jirtaa magaalada Kismaayo oo ah dhul-badeed aad istaraatiiji ugu ah Al-Shabaab kolak la eego qalabka uga yimaad badda.
Suxufigu wuxuu sheegay inuu ogyahay ilaa 200 oo dagaalyahan oo laga diray magaalada Kismayao, xagga ilaa 150 loo diray dhanka Dhoobley oo ka tirsan jubada dhexe.
Dawladda ku meel-gaadhka ah ayaa waxay ciidamada nabad ilaalinta ee Afrikaanka hi isla dhex marayaan inay ku jirto qorshe ah dib ula wareegidda magaalada Istaraatiijiga ah ee Kismaayo iyada oo isku halaynaysa ciidamada ka hawlgalaya dhanka xuduudda, kuwaasoo u fududayn kara dawladda inay si fudud kula wareegaan Kismayao.